Izifo ezithathelwanayo emathunjini kanye nemithi yabo
Izifo ezithathelwanayo zamathumbu kanye nokuphathwa kwazo yisisindo esiphuthumayo kakhulu. Phela, ukuphakama kwabo kwehla ekupheleni kwehlobo - ekuqaleni kwekwindla. Imifino nezithelo zivuthwa emasimini nasezindadi zemifino. Zizibheka ngokwabo ngokuvutha nokuphunga kwazo. Kungenzeka yini ukumelana nomkhiqizo "omusha", kodwa okuyisisekelo sokuwageza ubuvila. Yini esingayisho ngezithelo, ezithengiswa emathrethini emigwaqo kanye nezimakethe!
Ukushisa noma ukuthunga kwamanzi kukhuthaza ukukhiqizwa kwamabhaktheriya. Imifino kanye nezithelo ezintsha, esingazihlanzi ngaso sonke isikhathi, yizizathu ezenza kube lula ukubamba ukutheleleka emathunjini ehlobo nasekwindla. Izinhlobo ezingaphezu kuka-30 ziyaziwa yisayensi. Okungcolile kunazo zonke yilokho okuthiwa ukudla okunobuthi, futhi eyingozi kunazo zonke yikholera. Ama-causative of infest infections angaba: ama-bacteria (i-salmonellosis, isisu, isifo sekholera), amakhemikhali (botulism), kanye namagciwane (enterovirus). Ukutheleleka kanjani ngezifo ezithathelwanayo emathunjini kwenzeka?
Emzimbeni womuntu, ama-causative agents of the intestinal infections angena emlonyeni: kanye nokudla, amanzi noma ngezandla ezingcolile. Khona-ke ama-microbes athwalwa esiswini nasemathunjini, lapho aqala khona ukwandisa futhi aphonse imikhiqizo yomsebenzi wawo obalulekile egazini (ubuthi). Indlela yokunquma ukuthi unesifo sofuba emathunjini? Izimpawu zenzeka ngemva kwamahora ambalwa emva kokutheleleka emaphethelweni emathunjini. Umuntu uqala ukuzwa ubuthakathaka obunzima, kunesisindo esiswini, ikhanda, ukukhathala emehlweni. Ngemva kwesikhashana, ukuhlanza, isifo sohudo, ubuhlungu besisu buqinisa, ukukhulelwa komkhuhlane, ukukhukhumeza kungavela. Ukuhlolwa kokugcina kwenziwa udokotela ngesisekelo sokuhlolwa.
Kodwa ngenkathi uqobo yebo, yebo, kufanele ukwenze noma wenze, uma uhudo nokuhlanza sekuqalile? Kubalulekile ukulwa ne-causative agent yesifo. Ezinsukwini zakuqala zokwelapha ukutheleleka emathunjini emathunjini, isifo sezinambuzane emathunjini emathunjini amaningi, isibonelo furazolidone (uma ungenakho ukuphikisana), kufanelekile. Qinisekisa ukuthi uthatha amalahle asebenzayo okuthiwa i-sorbent (okungcono ngo-powder) noma i-analogue yayo. Uma ukuhlanza kuqala - hlambulula isisu (amanzi abilisiwe, isisombululo sobuthakathaka noma isisombululo sama-manganese). Bese uthatha amaphilisi ayishumi afanelekayo esikhwameni esisebenzayo noma enye i-sorbent. Thatha ama-antibiotic ngokudla okwejwayelekile kokudla akufanele kube. Banciphisa ingculazi, babulale amabhaktheriya asebenzayo. Kunoma yikuphi, misela umuthi udokotela.
Ngesifo sohudo nokuhlanza, ukuphuma kwamanzi emzimbeni ngokushesha kwenzeka. Ukulahlekelwa kwamanzi kanye nosawoti okuhlanjululwa yingozi enkulu, ikakhulukazi kwabantwana abancane kanye nasebekhulile. Umphumela ungaba ukwehluleka ukuqothulwa komzimba kanye nezinye izinkinga ezinkulu. Ngakho-ke, udinga ukuphuza okuningi, ngezigaba ezincane futhi kaningi. Phuza amanzi amaminerali, ama-compotes, iziphuzo zezithelo, amanzi abilisiwe nje. Kubantu abadala, isidingo sokuba uketshezi kulawulwa kahle ukoma, kodwa izingane kufanele zenziwe ukuphuza.
Kufanele ngibone nini udokotela ngokushesha?
- ukuhlanza kunamandla kangangokuthi awukwazi ukudla amanzi (ukuphelelwa yisikhathi ngokushesha),
- ukushisa okukhulu kakhulu (ukucindezeleka okukhulu enhliziyweni),
- uma esitokisini kwakukhona izidakamizwa ze-mucus noma igazi,
- isifo sohudo nokuhlanza okungaphezulu kwezinsuku ezimbili.
Khumbula ukuthi izifo ezinzima zamathumbu zingasakazeka. Ngakho-ke, kubalulekile ukunikezela ilungu lomndeni i-dishware ehlukile kanye nezindlu zangasese.
Ukuze ugweme ukutheleleka emathunjini, kubalulekile ukulandela imithetho eyisisekelo yokuhlanzeka komuntu ophucukile. Geza izandla ngaphambi kokudla, uphuze amanzi abilisiwe, ungadli imifino engahlanjululwa nezithelo, uqaphele ukudla okuphakade. Gwema isilingo sokuzama i-patty kusuka ku-tray noma cherry emakethe. Kubonakala sengathi akulutho olusha, kodwa yilezi zokupheka ezilula ezizokuvumela ukuba uchithe isikhathi sakho samahhala ngaphandle kokukhathazeka!
Imenyu yokudla. Ngesikhathi sokugula, ungabi njala! Yidla njalo, kodwa kancane kancane.
- Ama-biscuits omile, abaqhekezi kanye nokomisa;
- ezihlukahlukene ze-porridges emanzini;
- amasobho ane inyama enomzimba - inkukhu, i-veal;
- noma yikuphi imikhiqizo yobisi omuncu (i-kefir, ikakhulukazi i-biokefir, i-cottage shizi);
- apula osikiwe, i-banana, ilamula ukuze itiye;
- iqanda elibilisiwe;
Awunakudla: Ukudla okwandisa ama-intestinal peristalsis, inqubo yokuvutshelwa futhi equkethe ama-fiber ama-coarse akukhuthazwa:
- isinkwa esimnyama, rusks esesinkwa esimnyama;
- ubisi lonke, ama-yogurts, ubisi oluvuthiwe, ukhilimu, okusanhlamvu ngobisi lonke;
- ubhontshisi, beet, ukhukhamba, i-sauerkraut, isithombo, i-turnips, isithombo;
- I-Citrus (ama-mandarins, ama-oranges, njll), amapheya, ama-plums, amagilebhisi;
- inyama nezinhlanzi zezinhlanzi, amafutha ezinyama, inhlanzi, izinkukhu;
- iziphuzo ezinamandla (i-vodka, okuphambene nezinkolelo, iqinisa kuphela isifo sohudo).
Futhi khumbula ukuthi ukutheleleka kwamathumbu emathumbu kanye nemithi yabo kufanele ikhokhwe ngokucophelela! Ngaphandle kwalokho kufanele uvumele lesi sifo sisebenzise inkambo yayo. Uma ungaphuthelwa isikhathi, izinkinga ezinkulu zingase zivele futhi zibe mnyama ekuphileni. Naka izingane ngokukhethekile, ngoba azikwazi ukubhekana nokulimala kwenhlalakahle yabo. Impilo yakho nabathandekayo bakho basesandleni sakho.
I-pressotherapy, amasitokisi e-elastic and electrostimulation nge-insufficiency engenawo amandla
Kungani kungenjalo ukudlula okubandayo?
Radishka - i-fount entwasahlobo yamavithamini
Ukwelashwa kokuthuthumela kwezinyawo ngamakhambi abantu
Ukwelapha ubuhlungu esifundeni sesiteji
Indlela yokuqeda ukukhathala?
Ukusiza abanye, impilo yakho inhliziyo
Amakhekhe amhlophe "ahlaza" nge-tea matte evela kuhhavini le-microwave
UMaria Sharapova, biography
Kungani uphupha ukukopela umfana?
Pancakes nge ithanga noshizi
Ukupheka for the best hair shampoos ekhaya
Amaphutha angu-9 ekuziphatha okuphazamisa ukuthuthukiswa komsebenzi
Imikhuba emihlanu yasekuseni yabavila: Mane ulandele futhi ube ubuhle
Bachelor 2017 Russia: Ubani ozoba yi-hero yombukiso wenkathi 5, isithombe
I-Icelandic irayisi i-pudding
Izinja zePocket, ziyini amadwala?
Izipikili ezibomnyama: ama-top-10 ama-varnishes amahle kakhulu e-Halloween
Ithonya lokuphuza utshwala ekuthuthukiseni kwengane ye-neuropsychological
I-Samba - ukufutheka kanye nesifiso seBrazil kumdanso owodwa
Ukufakelwa izinwele ekhanda: okuyinhloko yenkambiso, izinzuzo nezinkinga
Yini elindele iSagittarius ngo-2014
Umona wesifazane noma indlela yokuqeda abaphikisanayo?
Indlela yokuvuselela ubuhlobo nomfana